Ny tsara indrindra tadalafil vovoka China Manufacturer orinasa
CMOAPI dia mpamokatra fanafody famatsiana vovo-tadalafil ambony kalitao sy tadalafil Mpanelanelana, ny volana afaka hatramin'ny 3100kg, ary manana rafitra fitantanana kalitao faran'izay tsara (ISO19001) sy rafi-pitantanana tontolo iainana (14001)
Vidio ny vovoka Tadalafil
The Magic Of Tadalafil Powder: fampiasana, tombontsoa, ​​dosie, effets de effets ary maro hafa
Inona ny vovo-dronono Tadalafil
Ahoana no fiasan'ny vovoka Tadalafil
Tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana vovo-dronono Tadalafil
Iza no afaka mampiasa vovoka Tadalafil
Fampahalalana momba ny fatra sy ny fomba fandraisana vovo-dronono Tadalafil
Ny voka-dratsin'ny fampiasana vovo-dronono Tadalafil
Aiza no hividianana vovoka Tadalafil an-tserasera
Fanontaniana sy valiny bebe kokoa momba ny vovo-dronono Tadalafil (Cialis)
Fividianana vovoka Tadalafil avy amin'ny CMOAPI
Ny erectile erectile (ED) dia olana iray natrehan'ny olona maro ary manohy miady isan'andro. Ny ED dia mipoitra rehefa tsy afaka mitazona fananganana ny filahiana satria ambany ny tahan'ny azota azôty azon'ny fihenjanana na anton-javatra hafa toy ny diabeta, haavon'ny kolesterola avo, ny hatavezina ankoatry ny hafa izay mitarika azy tsy afaka mijanona mafy ampy hidirana noho ny tsy fisian'ny hamafiny .
Tadalafil vovoka dia ampiasaina hitsaboana ED amin'ny lehilahy. Mampitombo ny fikorianan'ny rà, izay mety hitarika fananganana tsara kokoa mandritra ny fanentanana ara-nofo. Ny fikarohana vovo-dronono Tadalafil dia nanasongadina ny maha-zava-dehibe ny fampitomboana ny kalitaon'ny fananganana, ny faharetan'ny firaisana ara-nofo, ny fahafaham-piraisana ara-nofo, ny haavon'ny fahatokisan-tena rehetra - tsy misy fiatraikany ratsy na fahatsapana tsy ilaina matetika mifandraika amin'ny fanafody tsy fetezan'ny erectile hafa.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hifantoka amin'ny vovoka tadalafil manta sy ny tombony azo entina mahasalama anao izahay. Handeha ihany koa isika amin'ny alàlan'ny fiasan'ny asany, ny tombony, ny fahombiazany, ny fatrany ary ny fahafahany.
Tadalafil vovoka, fantatra koa amin'ny hoe tadalafil citrate dia fitambarana organika izay hita ao amin'ny takelaka tadalafil. Izy io dia novolavolain'ny Pfizer Inc. mba hitsaboana ny disfectile erectile (ED) amin'ny anarana hoe Cialis®.
Nampidirina tamina takelaka tadalafil ho tadalafil avy amina orinasa mpamokatra fanafody frantsay fantatra amin'ny anarana hoe Laboratoire LFB.
Ny vovo-dronono Tadalafil dia nankatoavin'ny US Food and Drug Administration (FDA) amin'ny fitsaboana ny erectile erectile (ED). Ity zava-mahadomelina ity dia an'ny kilasy antsoina hoe inhibitors phosphodiesterase-5 (PDE-5), ary ny Tadalafil dia miasa amin'ny alàlan'ny fialana amin'ny hozatra malefaka ao amin'ny lalan-dra. Izy io dia mampiroborobo ny fikorianan'ny rà amin'ny penisanao, izay mahatonga azy io ho lasa henjana hahomby amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo.
Ankoatry ny tsy fetezan'ny erectile (ED), ny tadalafil dia ampiasaina amin'ny fitsaboana aretina hafa toy ny hypertension arterial pulmonary sy hyperplasia prostatic (BPH). Tena zava-mahadomelina izany ary noho izany dia tsy tokony ho raisina raha tsy misy fanaraha-mason'ny mpitsabo.
Tany am-piandohan'ny taonjato faha-20, ny vovo-tadalafil dia nandalo fitsapana maromaro. Ireo fitsapana ireo dia natao mba hamaritana ny fiarovana sy ny fahombiazan'ny vovo-tadalafil sy ny takelaka tadalafil.
Ny fikarohana vovo-dronono Tadalafil dia manondro fa ny fitsaboana amin'ny vovo-tadalafil manta sy ny takelaka tadalafil dia manamaivana ny soritr'aretin'ny tsy fetezana erectile (ED) amin'ny mponina marobe efa niaina menopause. Ity vahoaka marary ity dia hita fa maneho fambara amin'ny vovoka tadalafil manta sy takelaka tadalafil.
Ny vovo-dronono Tadalafil dia mpanakanana PDE5, izay an'ny tablette tadalafil izay ampiasaina amin'ny fitsaboana ny erectile erectile (ED). Ny taona faramparany dia nahita fiakarana miavaka amin'ny fampiasana ny mpanakanana PDE5 ho fitsaboana laharana voalohany amin'ny fitantanana ED. Andao hojerentsika ny fomba hanatsaran'ny tadalafil ny fiasan'ny erectile:
● Ny vovobony Tadalafil dia manatsara ny fiasan'ny erectile amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fialan-tsasatry ny hozatra amin'ny alàlan'ny fampiatoana PDE5 (VIAGRA) ao amin'ny cavernosum corpus an'ny penis mandritra ny fanentanana ara-nofo, ka mitombo ny fikorianan'ny rà mankamin'io faritra io.
● Ny vovo-dronono Tadalafil dia miasa ho toy ny vasodilator ho an'ny lehilahy manana erectile ED. Manatsara ny lalan-drà manampy amin'ny fanatanterahana sy maharitra ny fananganana.
● Ny vovo-dronono Tadalafil dia alentika haingana ao anaty rafitra, matetika mampiseho ny vovo-dronono tadalafil ao anatin'ny antsasak'adiny raisina. Mijanona maharitra hatramin'ny 36 ora manome fotoana lava kokoa hanaovana firaisana alohan'ny hitakiana doka vovoka tadalafil hafa.
● Ny vovobony Tadalafil dia miasa amin'ny alàlan'ny fanalefahana ny hozatra malefaka ao amin'ny prostate sy ny tatavia, izay mitarika fitomboan'ny rà mandriaka izay mampitsahatra ny gorodonao. Tolo-kevitra fa ny vovo-dronono Tadalafil dia miasa toy ny vovoka Sildenafil (Viagra), raha tsy misy vokany be ho an'ny lehilahy voan'ny prostaty na fitehirizana.
Araka ny voalaza tetsy aloha, ny vovoka tadalafil dia nankatoavin'ny FDA ho an'ny fitsaboana ny tsy fahampian'ny lahy. Izy io dia singa iray lehibe amin'ny takelaka tadalafil novokarina ara-barotra toy ny CIALIS ary manampy ny marary ED hahatratra fananganana miaraka amin'ny fanentanana mety.
Tadalafil vovoka dia vokatra mahasoa indrindra ho an'ny lehilahy manana ED. Vovon-tsakafo tadalafil samy hafa no amboarina miaraka amin'ny fifangaroan'ny tadalafil, ka mahatonga azy ireo ho azo ampiasaina amin'ny karazan'olona maro.
Vahaolana voajanahary amin'ny tsy fetezan'ny erectile
Misy fomba maro samihafa ahafahan'ny lehilahy miaina olana amin'ny fananganana. Ny iray amin'ireo antony mahazatra indrindra amin'ny tsy fetezan'ny erectile dia ny fikorianan'ny rà mankarary amin'ny filahiana. Ny vovobony Tadalafil dia manampy amin'ny fikorianan'ny rà tsara kokoa mandritra ny fanentanana ara-nofo.
Ny fitomboan'ny rà mandriaka dia mamela anao, izay mijaly amin'ny olan'ny tsy fahazoana mihazona fananganana, hahazoana ra ampy ao amin'ny filanao ka mijanona mafy rehefa manao firaisana ianao. Izy io dia mahatratra izany amin'ny alàlan'ny fanalefahana ny lalan-drà amin'ny faritra misy penile sy ny hozatra manodidina ny filanao mba hikorianan'ny rà mora.
Mampitombo ny haavon'ny oksida azota amin'ny vatana
Ny vovo-dronono Tadalafil dia fanafody manampy amin'ny fanatsarana ny fikorianan'ny rà amin'ny penina amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny haavon'ny azôty azôty izay mety hitarika ny fialan-tsasatr'izy ireo.
Izany dia manamora kokoa ny fijanonan'ny sambo ireto rehefa ilaina izany mba hahafahan'izy ireo mifehy ny fananganana tsaratsara kokoa noho ny teo aloha - ary koa mahatonga azy ireo tsy hiteraka fahavoazana amin'ny fanitarana lavitra loatra na ho tapaka noho ny fitomboan'ny fitoviana. . Ity dia fomba iray hafa manatsara ny fikorianan'ny rà, mamela ny filahiana hitombo matanjaka sy malefaka kokoa.
Miady amin'ny soritr'aretin'ny hyperplasia (Prostatic Hyperplasia) (BPH)
Tadalafil vovoka dia mpiorina miasa ao Cialis, izay ampiasaina amin'ny fitsaboana ny soritr'aretin'ny prostaty mihalehibe. Ny vovo-dronono Tadalafil dia miasa amin'ny alàlan'ny fanalefahana sy fampitomboana ny lalan-dra mba hisy toerana bebe kokoa hikorianan'ny fisotrony ao anaty tatavia (fantatra amin'ny anarana hoe "vesicourethral function").
Ny vovo-dronono Tadalafil koa dia fanafody iray izay afaka manampy amin'ny fanalefahana ny soritr'aretin'ny BPH, toy ny fahasarotana amin'ny fanombohana ny fikorianan'ny fisotrony sy ny ony malemy. Ny tombo-tsoa amin'ny vovobony Tadalafil dia malaza indrindra amin'ireo marary mijaly matetika na maika mandritra ny alina
Manatsara ny fahasalamana Cardiovascular
Ny mpahay siansa dia mahita hatrany fomba hikarakarana ny vatantsika bebe kokoa noho ny teo aloha - ary ny vovo-dronono tadalafil no mety ho valin'ny fitazonana ny fiasan'ny fo salama.
Tadalafil vovoka dia fanampiny tsara ho an'ny tokantrano mitady hiaina salama sy fiaraha-miaina lava kokoa. Ny tombony azony dia ny fampihenana ny mety hisian'ny aretim-po amin'ny fampidinana ny tahan'ny kolesterola hatramin'ny 52%.
Tsy toy ny fanafody fanafody na fahazarana tsy mahasalama toy ny fifohana sigara; ity mpisolo toerana voajanahary ity dia tsy mitaky voka-dratsy ateraky ny kolesterola na ny tosi-dra (ary saika tsy azo atao mihitsy ny tsy ho andevozin!)
Tadalafil vovoka dia afaka manampy amin'ny fampihenana CRPHS. Ny fandinihana dia naneho fa mahasoa amin'ny fahasalamanao aretim-po, izay mahatonga ny vovo-tadalafil tsy maintsy ananana ao amin'ny kabinetranao fanafody.
Manakana ny fihenan'ny hozatra
Tetikasa fikarohana vovoka tadalafil vao haingana no nahitana an'i Tadalafil hanampiana ireo marary hiatrika karazana fitsinjaram-pahefana hozatra. Ny fandinihana dia nijery an'i Tadalafil, izay azo ampiasaina hanasitranana ny tsy fihanaky ny erectile lahy, ary ny mety ho fitsaboana io aretina tsy fahita io izay misy fiatraikany amin'ny latsaky ny 1% ny mponina.
Ny fanadihadiana dia nanadihady ny fomba omena ny vovo-dronono Tadalafil ho fitsaboana ny ED dia mety hanana tombony ihany koa momba ny fahasalaman'ny hozatra - indrindra raha ny amin'ny fifampiraharahana amin'ny endrika manokana amin'ny voan'ny hozatra antsoina hoe Becker's Muscular Dystrophy (BMD). Ity aretina tsy fahita firy ity dia miavaka amin'ny fahalemen'ny hozatra miandalana sy ny tsy fisian'ny asa.
Raha vao nivoaka ny dokotera BMD dia nihevitra fa ireo tranga ireo dia vokatry ny fananganana na famokarana proteinina asidra ao anaty hozatra; na izany aza, ny mpikaroka dia nahita hoe inona no tena antony mahatonga an'io aretina io sy ny fomba mety hanombohantsika mitsabo ireo voany.
Ny vovo-dronono Tadalafil, raha omena amin'ny doka ambany, dia mety ho afaka hampihena na hampiato an'io endrika aretina mikororosy io tsy hiharatsy kokoa.
Tadalafil vovoka dia famenon-tsoa manokana ho an'ny lehilahy. Izy io dia manome ny lehilahy vahaolana voajanahary ho an'ny tsy fetezan'ny erectile sy ny ejaculation aloha loatra; olana roa tena lehibe izay iadian'ny lehilahy maro. Ny pilina fotsy kely dia vita amin'ny akora voajanahary, izay mahatonga azy ireo ho azo antoka ho an'izay te hanomboka hankafy firaisana ara-nofo!
Raha ny marina, ny vovo-tadalafil dia tsy fomba tsara hananganana ny fananganana ho lava sy matanjaka kokoa, afaka manampy anao amin'ny fitantanana tosidra ihany koa, ampiasain'ny atleta ho toy ny fanampin-tsakafo mialoha ny fampiofanana, ary manampy ny lehilahy amin'ny prostaty mihalehibe.
Raha ny vovo-tadalafil no fanafody fampiroboroboana ny firaisana ara-nofo voalohany dia tokony hanao fikarohana vovoka tadalafil ianao, mamaky momba ny tadalafil amin'ny ankapobeny, ianaro ny fiasan'ny tadalafil amin'ny fitsaboana ny erectile erectile. ary ny tena zava-dehibe dia manatona ny dokoteranao.
Tanterahana am-bava izany; Ny vovoka tadalafil dia vaky ny atiny aorian'ny fidirany amin'ny lalan-drà, ary azo alaina indray mandeha isan'andro na ilaina izany.
Ny fatra tadalafil volo voatondro ho an'ny vao manomboka dia 5 mg ny vovo-dronono tadalafil manta alaina isaky ny roa na roa andro miaraka amin'ny sakafo na zava-pisotro. Atombohy amin'ity fatra ity ary avy eo raha tsapanao fa mila bebe kokoa ianao, dia mitombo tsikelikely hatramin'ny 10 mg. Azonao atao ny mampitombo ny fatra tadalafil hatramin'ny 25 mg / andro raha ilaina, fa tsy mihoatra izany.
Zava-dehibe ihany koa ny tsy fihinanana vovo-tadalafil tara loatra amin'ny andro satria mety hampiarina anao amin'ny alina izany.
Ny vovobony Tadalafil dia azo afangaro amin'ny zava-pisotro na alaina amin'ny sakafo. Tokony hotehirizina anaty fitoeran-drivotra lavitra ny hamandoana sy ny hafanana be izy io. Tokony hotazominao hiala amin'ny tara-pahazavana mivantana koa ny vovo-dronono tadalafil satria ho simba izany raha tratran'ny hazavan'ny UV mandritra ny minitra vitsy.
Tadalafil vovoka dia malaza amin'ireo atleta te-hiaina ny voka-dratsin'ny tadalafil nefa tsy mila mitelina kapsily na takelaka, olona izay sahirana mitelina pilina (toy ny olon-dehibe), ary ireo olona izay maniry fampiasa tadalafil mora ampiasaina fotsiny izy ireo dia tsy mitaky fanafody pil tadalafil manokana.
Koa satria vaky haingana ny vovo-tadalafil, dia azonao atao ny mampifangaro vovo-tadalafil manta ao anaty zava-pisotro na mampifangaro azy amin'ny sakafo rehetra ary tsy mila miandry ela ianao alohan'ny handehanan'ny tadalafil.
Ny vovobony Tadalafil dia miasa amin'ny anzima antsoina hoe phosphodiesterase type 5 (PDE-5), izay mampihena ny hozatra manodidina ny lalan-drà amin'ny lehilahy sy vehivavy ary manampy amin'ny fanatsarana ny fikorianan'ny rà ho an'ny mpampiasa maro.
Na izany aza, ny tadalafil vovoka dia tsy mandeha amin'ny rehetra, amin'ireo izay tsy mahita fanatsarana amin'ny tadalafil, dia misy ny voka-dratsiny mety hosedrain'izy ireo rehefa mandray tadalafil. Tsy lisitra feno amin'ny voka-dratsin'ny tadalafil ity, mety hitranga ny hafa:
● Tsindry ra - Ity dia voka-dratsin'ny fahitana mahazatra rehefa mandray tadalafil ary mety ho malemy fanahy ary tokony hanjavona raha vao tsy mihinana fanafody intsony ianao.
● Aretin'andoha: Misy olona mahatsapa aretin'andoha rehefa mandray tadalafil izay maharitra 24 ora indrindra. Mety ho mafy izany ary raha maharitra izany dia mila mitady fanampiana avy hatrany.
● Fihetseham-po / fitempon'ny vavony - Raha sendra maloiloy, mandoa, na mivalana ianao vokatry ny alikaola be loatra, tadalafil na fanatanjahan-tena mafy dia tokony hangataka fanampiana ara-pitsaboana haingana ianao.
● Mangana - Misy tranga sasany voarakitra an-tsoratra izay ahitan'ny olona rà avy amin'ny orony na siligaoma ary koa mangana rehefa mihinana ity fanafody ity. Tokony hangataka fanampiana ara-pitsaboana foana ianao raha mahita mariky ny fandehanan-dra tsy mahazatra.
● fihazonana ny mony - Vokany tsy fahita firy io ary miseho latsaky ny 1% -n'ny mpampiasa, eo no tsy mamoaka tsara ny urine ny vatana izay mety hitera-doza raha tsy voatsabo.
● Fiovana amin'ny fahitana - Tena tsy fahita firy ireo fiovana ireo ary ny tadalafil dia nalain'ny olona 10 tapitrisa manerantany, na izany aza, raha mahatsapa fiovana amin'ny fahitana ianao noho io fanafody io dia tokony ampahafantaroo ny mpitsabo anao avy hatrany. Tokony hisoroka ny fiara ianao na manao zavatra mampidi-doza rehefa mandray an'io fanafody io.
● Fivontosana amin'ny kitrokao na tongotrao - Ny mpampiasa sasany dia miaina ny fivontosan'ny tongony, ny kitrokeliny ary ny tongony rehefa mihinana ity fanafody ity izay afaka miaraka amin'ny mangidihidy sy mangidihidy. Raha mahatsikaritra ireo soritr'aretina ireo ianao rehefa mihinana fanafody, dia mifandraisa haingana amin'ny dokoteranao.
Ny voka-dratsy dia mety tsy hitovizany amin'ny vovo-dronono vovoka tadalafil, fa ny voka-dratsin'ny vovoka tadalafil mahazatra indrindra dia ny aretin'andoha sy ny flushes mandritra ny fotoana fohy (aretin-koditra malefaka izay fahita matetika eo amin'ny presets tadalafil omena amin'ny doka avo kokoa), indrindra aorian'ny fisotroana alikaola na alika alfa- mpandraharaha fanakanana adrenergika (toy ny tamsulosin).
Ny fividianana vovo-dronono tadalafil dia mora be ankehitriny. Azonao atao ny mividy vovoka tadalafil amin'ny toerana maro samihafa amin'ny Internet, ao anatin'izany ny tadalafil vovoka alibaba, tadalafil vovoka pakistan, tadalafil vovoka usa, tadalafil vovoka india, forum vovoka tadalafil sns. mividy amin'ny tranokala tsy fantatrao.
Amin'ny maha-fitsipika anao dia tokony hitandrina ianao amin'ireto zavatra manaraka ireto rehefa mividy vovoka tadalafil;
1. Hamarino tsara fa azo antoka ny mividy vovoka tadalafil manta amin'ny Internet amin'ny tranokala nofidinao;
2. Hamarino tsara fa manome vovo-dronono tadalafil 100% tena izy tsy misy additives (raha azo atao);
3. Hamarino tsara fa manome valisoa miverina amin'ny varotra tadalafil amidy izy ireo raha sanatria tsy afa-po amin'ny valiny ianao;
4. Alao antoka fa manana serivisy ho an'ny mpanjifa sy laza tsara ny tranonkala;
5. Mitadiava hevitra momba ny vovoka tadalafil bebe kokoa hahitanao izay nolazain'ny olon-kafa momba ilay tranonkala (misy maro any);
(1) Mandra-pahoviana ny vovon'ny tadalafil?
Ny fampiasana vovo-dronono Tadalafil dia mety maharitra 36 ora. Izy io dia afaka manampy amin'ny fitazonana ny fananganana anao na dia eo aza ny ejaculation. Raha maharitra mihoatra ny 4 ora ny fananganana dia mitadiava fitsaboana vonjy maika satria mety hitarika fahasimbana maharitra izany.
(2) Moa ve ny vovo-tadalafil tsara toa ny vovoka Cialis?
Ireo zavatra roa ireo dia samy manana ny akora mavitrika nampiasana ny erectile erectile; ny hany mampiavaka azy dia ny tadalafil dia ny kinova generika.
(3) Moa ve matanjaka ny vovo-tadalafil noho ny vovoka sildenafil?
Samy miasa izy ireo mba hitsaboana ny tsy fihenan'ny erectile, ary ny tena maha samy hafa azy ireo dia ny faharetan'ny vovoka tadalafil raha oharina amin'ny vovon sildenafil. Ny vovo-dronono Tadalafil dia mety maharitra hatramin'ny 36 ora ao amin'ny vatana, raha maharitra 5 ora kosa ny vovoka sildenafil.
(4) Resipeo Powder Tadalafil: Ahoana ny fampifangaroana ny vovoka tadalafil amin'ny endrika ranoka
Azonao atao ny manamarina fampahalalana bebe kokoa momba ny torolàlana amin'ny fananganana vovoka tadalafil ho lasa endrika misy rano amin'ny alàlan'ity fanarahana ity rohy ity, avy eo ataovy tsikelikely fa tsy maninona.
Raha te-ho voaro ianao ary alao antoka fa mandray vovoka tadalafil tena izy 100% tsy misy karazana fanafody vahiny ianao dia tokony hanandrana ianao.
CMOAPI no toerana tsara indrindra hividianana vovoka tadalafil amin'ny ankabeazany, izay afaka manolotra vokatra avo lenta izay vita amin'ny tranokala nankatoavin'ny GMP sy DMF. Ny vidin'ny Tadalafil dia tsy azo resena ary ny serivisinay mpanjifa dia faharoa. Tsy hahita kalitao tsaratsara kokoa ianao any an-toeran-kafa!
Te hanana fomba mora sy malina ahazoana izay ilainao ianao nefa tsy mila mandalo ny olana rehetra? Miaraka aminay, tsy mora izany! Ny hany mila ataonao dia ny manafatra amin'ny Internet na miantso ny iray amin'ireo solontenanay ary hikarakara ny zava-drehetra avy any izahay.
Tsy maninona na any Amerika na Eropa ianao no mipetraka, afaka mandefa eran'izao tontolo izao koa izahay ka na aiza na aiza misy anao dia afaka manampy amin'ny filanao izahay. Aza miandry intsony intsony - tsindrio eto raha hividy vovoka tadalafil amin'ny tranokalanay!
 Sriram D. Simia fanafody. Pearson Education India, 2010. p. 635.
 Wang Y, Bao Y, Liu J, Duan L, Cui Y (Janoary 2018). "Tadalafil 5 mg indray mandeha isan'andro dia manatsara ny soritr'aretin'ny urinary ambany sy ny tsy fetezan'ny erectile: famerenana sy fanaraha-maso Meta". Soritr'aretin'ny lalan-dra ambany. 10 (1): 84–92. doi: 10.1111 / luts.12144. PMID 29341503. S2CID 23929021.
 Fikarakarana ara-pahasalamana mitambatra (16 Aogositra 2016). "Famintinana ny fandrakofana - Fitsaboana tsy fahampiana" (PDF). Fikarakarana ara-pahasalamana mitambatra. Nalaina tamin'ny 20 Des 2016.
 "Tadalafil". Tetikasa tombontsoa ara-panafody. Hita tao amin'ny 2020-08-19.
 Richards, Rhonda (17 septambra 1991). "ICOS Amin'ny lohataona ambony indrindra amin'ny roller coaster". USA Ankehitriny. p. 3B.
 "Tadalafil - Antontan'isa momba ny fampiasana zava-mahadomelina". ClinCalc. Nalaina tamin'ny 11 aprily 2020.
 Kaye K. Gaines. "Tadalafil (Cialis) sy Vardenafil (Levitra) fanafody ankatoavina tato ho ato amin'ny tsy fetezan'ny erectile". Medscape.
"" Cialis tadalafil PI ". Fitsaboana entam-panafody. Hita tao amin'ny 2020-08-19.
 Borthwick AD (Mey 2012). "Gazety 2,5-Diketopiperaera: Syntèse, réaction, Simia fanafody ary vokatra voajanahary voajanahary". Hevitra momba ny simika. 112 (7): 3641–3716. doi: 10.1021 / cr200398y. PMID 22575049.